८० दिनपछि खुकुलो भएको लकडाउन : के के गर्न पाइने ? – MySansar
८० दिनपछि खुकुलो भएको लकडाउन : के के गर्न पाइने ?
Posted on June 11, 2020 June 11, 2020 by Salokya
चौतर्फी विरोध र अवज्ञा हुन थालेपछि जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने पूर्व घोषित योजनाबाट पछि हटेर आजैदेखि केही खुकुलो बनाएको छ। केही व्यवस्था जेठ ३२ पछि मात्रै लागू हुने भनिए पनि केही चाहिँ खुला गरिएको छ। त्यसो त सरकारले खुला नगरे पनि मान्छेले स्वस्फूर्त पसलहरु खोल्न थालिसकेका थिए र सडकमा चाप पनि देखिसकेको थियो। इनफ इज इनफ भन्दै देशभर प्रदर्शनसमेत हुन थालेको छ। चैत ११ गते लकडाउन घोषणा भएपछिको ८० औँ दिनमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले लुजडाउनका निर्णय सुनाए।
-पैदल हिँड्न पाइने, मास्क लगाउनु पर्ने।
-पसल, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, डिपार्टमेन्टल स्टोर खुला- सपिङ मल भने बन्द छन्।
-साइकल र मोटरसाइकल चल्न दिने। मोटरसाइकलमा चलाउने मात्रै। पछाडि अरुलाई राख्न नपाइने। सार्वजनिक यातायात भने बन्द नै।
-काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्रमात्र चलाउन पाइने गरी निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन पाइने। अर्थात् जोर गते जोर नम्बरका गाडी, बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका गाडी। यस्ता गाडीमा चालकबाहेक थप दुई जना राख्न पाइने।
– श्रमिकको आवागमनका लागि यातायात खुला। एउटा गाडीको सिटमा एक लहरमा एक जना मात्रै। गाडीलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने। यात्रुले मास्क लगाउनु पर्ने।
-बैँक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा पूर्ण रुपमा खुला। तर दुई सिफ्टमा। बिहान ८ देखि दिउँसो १, दिउँसो १ देखि साँझ ६ बजेसम्म।
-रेस्टुरेन्टमा टेक अवे सेवा। प्याक गरिएका सामान किनेर घरमा लान सकिने।
-होटल चाहिँ क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटलमात्र सञ्चालन।
-ब्युटीपार्लर, पार्टी प्यालेस, जिमखाना, सैलुन, सिनेमा हलहरु भने बन्द नै।
-अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक नियमित उडानहरु बन्द नै। अनुमति लिएर उडान गर्न सकिने।
-सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन गर्न नपाइने ।
– धार्मिक स्थल र खेलहरु पनि बन्द।
यस्तो छ सरकारको निर्णय-
सञ्चालन गर्न नपाइने
यस अनुसार ट्राफिक प्रहरीले निकालेको सूचना अनुसार निजी अर्थात् रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनमात्र जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर नम्बरका गाडी चलाउन पाइनेछ। यसअघि पास लिएका सवारी साधनहरुमा पनि जोर बिजोर लागू हुनेछ। कालो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन पाइने छैन भने राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चल्न रोक लगाइएको छ।
1 thought on “८० दिनपछि खुकुलो भएको लकडाउन : के के गर्न पाइने ?”
Pingback: ‘लकडाउन’ औपचारिक रुपमा मध्यरातदेखि सकियो तर सतर्क हुनुस् है « Mysansar